DeFi अर्थात् विकेन्द्रीकृत वित्त भनेको के हो ? | CoinDesk Nepal
Home Blockchain Guides DeFi अर्थात् विकेन्द्रीकृत वित्त भनेको के हो ?
DeFi - coindesknepal.com
आजकल Crypto-Space मा Decentralized Finance (DeFi) को निकै धेरै चर्चा छ। Decentralized Finance (DeFi) बुझ्न मन छ भने यी ५ कुराहरु जान्नै पर्छ।
१) Decentralized Finance (DeFi) भनेको के हो?
Decentralized Finance (DeFi) – विकेन्द्रीकृत Finance भनेको Financial Application हरुको ecosystem लाई जनाउँछ जुन ब्लकचेन नेटवर्कमा निर्माण गरिन्छ। यसले एक खुल्ला-स्रोत, अनुमतिविहीन, र पारदर्शी वित्तीय सेवा प्रणालीको सिर्जना गर्दछ जुन सबैको लागि उपलब्ध हुन्छ र कुनै केन्द्रीय अधिकार बिना संचालन हुन सक्दछ। यसका साथै प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो सम्पत्तिमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न सक्दछन्।
२) विकेन्द्रीकृत Finance का फाइदाहरु के-के छन् ?
विद्यमान अर्थतन्त्रमा बैंकहरू र अदालतहरू मध्यस्थको रूपमा अवस्थित छन्। DeFi Application हरूलाई कुनै मध्यस्थको आवश्यकता पर्दैन। कोडले हरेक सम्भावित विवादको समाधान गर्दछ, र प्रयोगकर्ताहरूले सबै समयमा उनीहरूको रकममाथि नियन्त्रण राख्न पाउदछन्।
यी नयाँ DeFi Apps हरू blockchains मा बनेका हुन्छन् जसकारण क्षतिको एकल बिन्दु हटाइन्छ। किनकि डाटा blockchain मा रेकर्ड गरिएको हुन्छ र हजारौं नोडहरूमा फैलिएको हुन्छ, साथै यसले data को censorship वा सेवाको सम्भावित shutdown लाई हटाइदिन्छ।
३) DeFi को लागि सम्भावित प्रयोगहरु के के हुन्?
Borrowing and Lending: DeFi मा Borrowing and Lending garda काउन्टरपार्टी जोखिम कम हुन्छ, लेन-देन छिटो र सस्तो बनाउँदछ।
Monetary banking services: Blockchain मा मध्यस्थहरूको आवश्यकता हुदैन र धेरै सहभागीहरू बीच जोखिमको वितरण हुन्छ जसकारण यो सेवा समान हुनुका साथै कम प्रीमियममा पाउन सकिन्छ।
Decentralized Marketplaces: DeFi प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई डिजिटल सम्पत्ति ट्रेड गर्न अनुमति दिन्छ, एक विश्वसनीय मध्यस्थ (एक्सचेन्ज) को आवश्यकता बिना। ट्रेडहरू Smart Contract को मद्दतमा प्रयोगकर्ताहरुको वालेटबीच सजिलै हुन्छ। विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजहरूमा सामान्यतया यसै कारण केन्द्रीकृत एक्सचेन्जहरू भन्दा कम ट्रेडिंग शुल्क हुन्छ।
४) DeFi मा कस्ता चुनौतीहरू छन्?
खराब प्रदर्शन: ब्लकचेनहरू उनीहरूको केन्द्रीकृत समकक्षहरू भन्दा स्वाभाविक रूपमा ढिलो हुन्छन्, र यसै कारण DeFi Apps पनि ढिलो हुन्छन्।
प्रयोगकर्ताहरुले गर्ने त्रुटिको उच्च जोखिम: DeFi Apps हरूले जिम्मेवारलाई प्रयोगकर्तामा हस्तान्तरण गर्दछ। यो धेरैका लागि नकारात्मक पक्ष हुन सक्छ।
अव्यवस्थित ईकोसिस्टम: एक विशिष्ट प्रयोगको केसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त App फेला पार्न गाह्रो हुन सक्छ, र प्रयोगकर्ताहरूसँग सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरू फेला पार्ने क्षमता हुनुपर्दछ। चुनौती भनेको एप्लिकेसनहरू निर्माण गर्ने मात्र नभएर त्यसलाई कसरी फराकिलो DeFi इकोसिस्टममा फिट राख्ने भन्ने पनि छ।
५) DeFi र खुला बैंकिंग बीच के भिन्नता छ?
खुला बैंकिंग एक बैंकिंग सिस्टम हो जहाँ तेस्रो-पक्षलाई API मार्फत वित्तीय डाटाको पहुँच दिइन्छ। यसले बैंकहरू र गैर-बैंक वित्तीय संस्थानहरू बीचको डाटाको network सक्षम गर्दछ। मूल रूपमा, यसले परम्परागत वित्तीय प्रणाली भित्र नयाँ प्रकारका उत्पादनहरू र सेवाहरूलाई अनुमति दिन्छ।
DeFi एक पूरै नयाँ वित्तीय प्रणाली हो जुन वर्तमान पूर्वाधारबाट स्वतन्त्र छ। यसलाई खुला वित्त (Open Finance) पनि भनेर चिनिन्छ।
DeFi अर्थात् विकेन्द्रीकृत वित्त परम्परागत आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीबाट अलग Financial सेवाहरूको निर्माणमा केन्द्रित छ। यसले अधिक खुला Financial प्रणालीको लागि अनुमति दिन्छ र सम्भावित रूपमा censorship र विश्वव्यापी भेदभावको अन्त्य गर्न सक्छ।